ပညာရိများ နဲ့ နိုင်ငံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » ပညာရိများ နဲ့ နိုင်ငံ	8
Posted by မြစပဲရိုး on Oct 10, 2015 in Critic | 8 comments
သတင်း ဂျာနယ် တွေထဲ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေထဲ
စကားလုံး အကြီးကြီး တွေ နဲ့ ဝေဖန်မှုများ
မရိုးနိုင် အောင် တွေ့နေရ။
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် တွေ့လိုက်သေး။
အဲဒီ စကားလုံး တွေ က တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးတာလား။
မတရားမှု ကို ပိုကြီး အောင် အားပေးနေတာလား။
ဆိုတာလေး ကို တော့ စမ်းစစ်ကြပါ။
မဟုတ်ရင်တော့ အဲဒါဟာ ပညာရှိ တဲ့ စကား မဟုတ် ဘဲ ပညာ တွေ ရိ နေတဲ့ စကားဘဲ ဖြစ်မယ်။
တစ်ချို့ က သိပ်ပြီး ပညာကြီးကြတယ်။
လက်ရှိမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြပ်အတည်း ဒုက္ခ က ဘာလဲ ဆိုတာ ကို မသိဟန်ဆောင်နေကြတယ်။
ပထမ အဆင့် ကို မကျော်နိုင်သေးဘဲ ဒုတိယ အဆင့် ကို ရောက်ရင်ဖြင့် ဘယ်သို့ ဘယ်ချမ်းသာ၊ ဒီပုံ နဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား ပေါ့။
မုန့်ဆီကြော် က ဘယ်မှာနေမှန်းမသိ နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလား ပြောသလိုဘဲ။
တိုင်းပြည်ကို ဖိနှိပ်ထားတဲ့ လက်ထဲ က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ စည်းလုံးနေရမဲ့အချိန်မှာ ရှေ့ကတိုးပေးနေသူ ကို ခြေထိုးပေးသလို လို့ ဘဲ ခံစားရတယ်။
လက်တွေ့မှာ အာဏာရှင် ဘဏ္ဍာခိုးများ ကြောက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်ဘဲ ရှိတယ်။
သူ့ ကို ပြပြီး ကမ္ဘာမှာ နည်းလမ်းစုံ နဲ့ လုပ်စားလို့ ကောင်းလို့။
အဲဒီ အတွက်ကြောင့် ဒီအမျိုးသမီးကြီး ကို လူကြားထဲ လွှတ်ခဲ့တာ။
အဲဒီနောက်မှာ ကျွန်မတို့ ရဲ့ အကြောက်တရားတွေ နဲနဲရော့ သွားတာ မြင်နိုင်သားဘဲ။
ကျွန်မတို့ ရှေ့မှာ အဲဒီ အမျိုးသမီးကြီး ရပ်နေတာကိုး။
အာဏာရှင်များက ဒီအမျိုးသမီးကြီး နဲ့ ယှဉ်ပြီး နာမည်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ပြည်သူတွေကို ဟန်လုပ်ပြီး အလျှော့ပေးလာချိန်
အရင် ဟိုမရောက်ဒီမပေါက် ပညာသည်များမှ အဲဒါ ကို မျက်ကွယ်ပြုလာ ကြတယ်။
ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်အစွမ်းနည်းပါးလို့ အရင်တုန်းက ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ ကို ထိအောင် မတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးကြီး တွေက ဒီ အမျိုးသမီးကြီး ဆီ ကို လှည့်လာကြတယ်။
မရောက်သေးတဲ့ အနာဂါတ် မှာ ဖြစ်လာနိုင်မဲ့ ပြသနာ တွေ ကို ချပြပြီး အာရုံ လွှဲ နေကြတယ်။
ပစ္စုပန် မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာ တွေ ကို ရင်မဆိုင် ရဲကြဘူး။
စကားလုံးချပြီး ရေးရုံကတော့ နိုင်ငံခြား ဘုတ်အုပ်ကြီးများ က အလွယ် ခိုးချ လို့ ပြောနိုင်တာ အလွယ်လေးပါ။
လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြီး လုပ်ပြဖို့ သာ ခက်တာပါ။
ဒီ လူ တွေ အားလုံး က လက်တွေ့မှာ အာဏာရှင်များ ရဲ့ ခြေလှမ်း ကို ရပ်ဖို့ မပြောနဲ့။
သူတို့ က ကိုယ့်ဘဝ ကို နင်းမသွားအောင်တောင် မနဲ ရှောင်နိုင်ဖို့ လုပ်နေကြသူတွေချည်းဘဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ကောင်းကောင်း မကာကွယ်နိုင်ဘဲ အများပြည်သူ ကို ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အစွမ်းရှိပါ့မလဲ။
ဒါပေမဲ့ ဆရာကြီး လုပ်ပြီး ပညာ လဲ ပြချင်တော့ အဝေး အခြေအနေ ကို လှမ်းပြီး ဝေဖန် နေကြတော့တာ လို့ ဘဲ မြင်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အာဏာရှင်များရဲ့ မတရားနည်းပေါင်းစုံ ၊ ညစ်လုံးပေါင်းမျိုးစုံ နဲ့ ယုတ်မာနေမှု တွေ ကို ဝေဖန်ဖို့ မကြိုးစားရဲကြဘဲ
အဲဒီ ထောင်ချောက်တွေ ကို လွတ်အောင် ဘောင်ထဲ ကနေ ကြိုးစား ရှောင် နေရတဲ့ အမျိုးသမီး ကြီး ရဲ့ စကားလုံး တွေ ကို တော့
ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ဝေဖန်ရဲ ကြတဲ့/ ဝေဖန်နေကြတဲ့
.မြန်မာပြည် ကရော၊ ပြင်ပကရော ထိုထိုသော ပညာရိ ကြီး များ အားလုံး ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: တခါတလေ ကိုယ်က အားမရလောက်အောင်ကို အမေစု ပြိုင်တာ တရားမျှတလွန်းနေတယ်။
ဟိုဘက်က သိက္ခာမရှိ အောက်လုံးသမားတွေချည်းပဲ။
တခါတလေတော့လည်း သူ့ကို အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ပြိုင်ဘက်ရစေချင်တယ်။။
ဒါကိုမှ သူ့ကိုပဲ ဖိချင်ပြောချင်နေတယ် ဆိုရင်တော့လည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သာပြန်စမ်းစစ်ကြည့်တော့။…
မြစပဲရိုး says: Thanks ZZ. :-))
Wow says: ကကြောင်ရီး နဲ့ ဒဂျီး အာ့ နိတို့ကိုပေါဒါ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
အဲဒါ.. ကကြောင့်ကိုပြောဒါ…။ ဟုတ်တယ်.. ဟုတ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်တို့ ကြောင်ကြောင်လေး က ပညာ မရိ ပါကွယ်။
ရှ ရုံလေးပါ။ :-)))
. ပြောတဲ့ အထဲ ရွာ ထဲ က လူ တွေ မပါပါဘူး။
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ကို စိတ်ပျက်လွန်းလို့ပါ။ မှတ်ချက် – ကြောင်ကြောင် တို့ မြို့ မှာ ဒီချုပ် ရံပုံငွေ စတိတ်ရှိုး ဒီနေ့ ညနေ (သူရို့ စံတော်ချိန်) ရှိတယ်။
ဒင်း က ရှောင်နေမလား၊ ဝင်နွှဲမလား သိချင်သား။
သူငယ်ချင်း တစ်ချို့ လဲ အဝေးကြီး ကို ဝင်နွှဲဖို့ တဲ့။ သွားနေကြပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ပေါက်ပေါက်လျှာလျှာဗျာ…. ငွေ တွင်းထဲက နှိုက်လို့ရ မှက်သလား လော်ဘီတီတီမြ။
Shwe Ei says: -အိုက်ဒါ အရီးတို့အိမ်နားတင်မှုတ်ဖူး…သများတို့ အိမ်နားမှာလဲ
-ဒေါ်စု မကြိုက်ကြောင်း စာဖတ်ပျနေတဲ့ လူဒွေအပုံရီး..
-ဘာကိုပျောချင်နေမှန်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မမြင်ရလို့သာ ကျိနေတာ.
-မဟုတ်ရင်…အမုန်းခံပီး ရန်ဖြစ်မလို့ စိတ်ကူးဘီးသား .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12186
Alinsett @ Maung Thura says: တစ်ချို့ က သိပ်ပြီး ပညာကြီးကြတယ်။
လက်ရှိမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြပ်အတည်း ဒုက္ခ က ဘာလဲ ဆိုတာ ကို မသိဟန်ဆောင်နေကြတယ်။ အဲဒီ ဝါကျလေး ဖတ်မိတော့…
.ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြေးမြင်မိ…
အတော့်အတော်ကို ငြိမ်နေတာတော့ သိပ်မကောင်းဘူး….နော့… ဒါနဲ့… ပြည်သူ့ဘက်က နိုင်ငံရေးပညာရှင် တချို့ ငြိမ်နေတာအပြင်…
.အာဏာရဖို့တစ်ခုတည်းဘက်က… အဘတို့လည်း အခုတလော ငြိမ်နေသလားလို့… .အမေစု တို့… ခွတ်ဒေါင်းတွေ တောင်ပံဝင့်ပြီး…တိုင်းပြည်အနှံ့ တဖျောင်းဖျောင်း ပျံသန်း..
.သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုကြ… ဆိုကြ…
(အမေစုကို (တဖတ်သတ်အထင်အမြင် လွဲမှားနေပြီး..) မုန်းနေတယ်..လို့… ယူဆရတဲ့ ရခိုင်ပြည် ခရီးစဉ်မှာတောင်…အထင်နဲ့ အမြင် ဝက်ဝက်ကွဲအောင် လွဲပြီး…ကြိုကြဆိုကြ… အားပေးထောက်ခံကြ)
အားကြိုးမာန်တက်… ပြည်သူနဲ့.. ပြည်သူကြားက အစိုးရ-အတိုက်အခံပါတီကြီး…ထိပ်တိုက်တွေ့…
အဘတို့…. သိပ် မလှုပ်ပါလား..
အကြံအစည်တစ်ခုခုတော့ ရှိမယ်ထင့်… အာဏာရ…. လက်နက်ရှိ… ကောက်ကျစ်ယုတ်မာ… ကိုယ်ကျိုးပဲ ကြည့်တတ်သူတို့… အခုလို ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတာ…….